Waxay dhaheen miriqdaada oo badata qiimahaaga ayey hoos u dhigtaa. Inta badan ee lagu arko ama lagu maqlo waa inta badan oo caadi laguu arkaa, mar haddii aad caadi noqotana qiimahaaga ayaa hoos noqda, dadka xiisahooda xaagaga ku aadan waa in uu mar walba kor noqdaa sida ay taas ku suura galaysana adiga ayaa lagaa doonayaa.
Qof walba sida uu qiimihiisa kor ugu qaadi karo isaga ayaa laga rabaa in uu garto balse, halkan talooyin yar yar ayaan kugu siinayaa.
Haddii aad koox ka tirsantahay ama si’ aad qayb uga tahay Bulsho, waxaa kula gudboon in aad maalmo ka gambisato oo naftaada la kali noqoto adiga oo muuqaaga iyo maqalkaagaba ka qarinaya, talaabadaas waxay kor u qaadaysaa qaddarinta laguu hayo waxayna qasbaysaa in wax la is kaa waydiiyo oo lagu tabo qiimahaagana la dareemo.
Balse iska dhuumo oo iska tag ma ahan howsha, waa in aad garan kartaa waqtiga ay ku haboontahay goosashadaada ama qarinta muuqaaga iyo maqalkaaga.
Abuuro qiimo iyo qaddarin waara oo mar walba lagugu soo xusuusto.
Wuxuu yiri ” maqalka codkaaga waa daganaanta ii sii dhawaysa in aan noqdo noolaha kan ugu faraxadda badan.
Sidoo kale waxaan ku dareemaa nabadgalya joogta ah, wuxuuna qalbigayga ku beeraa Nolal maalinba maalinta ka dambaysa”.
Waxtarka noloshaada wuxuu kaamilmaa marka aad xuduud u kala samaysato waxa ku farax galsha iyo waxa aan ku farax galin.
Gafka noloshaada yuusan ku cuslayn oo ku murjin, waa in uu kuu noqdaa jaranjaro aad uga gudubto caqabadaha kugu hor gudban .
Alle nolosha wuu fududeeyay haddaadan adiga isku adkaynayn.
Nolosha in lagu noolaado ayuu Alle ugu tala galay haddaadan diidayn in aad noolaato.
Nolosha waa farxad iyo murugo, labadaasna waxa la isku raaciyay waa in mid walba casharka ku jira aad wax ka barato, si aad awood aad ku qaabisho labadeeda dhinacba u yeelato.
Bal is waydii sidaas ma uga faaiidaysataa.
5-Qof saamayn ku yeelo.
Isku day in aad mar walba sabab u noqoto in qof kaa fakaro.
Isku day in mar walba aad qayb ka noqoto ducada qof Alle ku tuugayo, oo qof alle tuugayo ducadiisa qayb ku yeelato.
Isku day in qof qalbigiisa aad Deegaan ku yeelato, meel dunida la dago qalbiga ayaa ugu qiima badan.
Wax walba oo noloshaada aad ficil ahaan u samayso waa lagaaga dayan karaa balse, dareenkaaga cid kaaga dayan karta ma jirto ilaa aad ficil ahaan u muujiso.
Haddii dareenkaaga aad ilaashato ma jiri karto cid ku dhaawici karta ama kugu dhibi karta, dunida gacantaada ayey ku jirtaa inta dareenkaaga aad ilaashato.
Bushimahaaga runta ku qurxi.
Si wanaagsan u isticmaal dhamaantood, noloshaada way qurux badnaanaysaa.
8-Dambiga kaa dhacay.
Shallayto ku qaabil khalad walba oo kaa dhacay.
Ku hano kalsooni xaaladdaada maanta.
Kuna wajah mustqbalkaaga cabsi l’aan.
9-Qalbiga khayr u sheeg.
Qalbiga waa wixii loo sheego iyo wax uu soo janto.
Jamashada waa halkeeda, laakin wax sheegista qalbigaada aad wax u sheegto ha ahaato farxad iyo khayr, xitaa haddii markaa xaalad nuucaas ah aadan ku sugnayn.
Sida marku roobka dhinacya kala duwaan kaaga yimaado waxa kaliya ee xusuutaada soo qabsanayso waa Dalladdii aad uga onkaran kahayd.
Hadaba sidaas si la mid ah u xusuusnoow Alle mar walba oo waddooyinka kaa soo xirmaan iyo marka ay kuu wada furan yihiin.
11-Xadka ha dhaafin
12-Wanaag kula jecel
Qofka mar walba wanaaga kuu rajeeya kuu sheegana wax wanaagsan uun dadka wuu kaaga sokeeyaa.
Igu xisaabi in aan ahay mid ka mid ah dadka kula jecel in ay wax wanaagsan ku shubaan dhagahaaga iyo laabtaadaba .
13-Lacag vs caqli